Makula tahay in cabitaanka qabaw uu dhibaato caafimaad keeni karo? | Radio Himilo
Home / Caafimaad / Makula tahay in cabitaanka qabaw uu dhibaato caafimaad keeni karo?
Makula tahay in cabitaanka qabaw uu dhibaato caafimaad keeni karo?
Muqdisho – Badi dadka waxa caado u ah cabitaanka qabaw xilligga cunnada ama kaddib, balse waxa la warinayaa iminka in uu waxyeeleyn karo dheef-shiidka.
Khabiir dhanka cunnada ah “Irina Khristianovic” ayaa daah rogay in joogteynta cabitaanada qabaw waqtiga cuntada ama kaddibba ay si toos ah u waxyeeleynayaan dheef shiidka, sababtuna ay tahay in xilligaas loga doonayo inuu diirannaado halka cabitaanadaas qaboojinayaan.
“Waxa uu cabayaa shaqsiga biyo soo maray qaboojiyaha ama cabitaanno kale oo la qaboojiyay, waxay qasbayaan in raashiinku toos u wajaho caloosha halkii uu mari lahaa burburinta rasmiga ah oo qaadan lahaa ku dhawaad saacad, taas waxa ay suuragelinaysaa inuusan raashinka u shiidmin sidii laga doonayay kaddibna uu u gudbo xiidmaha ayuu yiri khabiir “Irina”.
Dhaqankaas sida uu khabiirku sheegayo waxa uu ruuxa caadeysta ku riixayaa gaajo joogta ah, waana tallaab ka dhalay raashiinka oo si fudud uga gudba caloosha, una gudba Xiidmaha.
Sidoo kale waxay caadadaan khatar toos ah ku tahay maadooyinka protein-ka ee jirka, Sababta oo ah walxaha borotiinka ee u baahan waqti dheer in la dheef-shiido waxay u dhaqaaqayaan xiidmaha si dhakhso ah, taas oo keeni karta kubbadda xiidmaha iney noqoto mid lagu sumoobo.
Gunaanadkii talo caafimaad ahaan waxa ay qabaan dhaqaatiirtu in cunnada lagu qaato cabitaan diiran sida shaaha iyo qahwada, kaddibna qofka wixii uu doono ka daba marsado.
Isha: Forum Medicom
Previous: Waxa la geliyay sanduuqii maydka, balse waxa la ogaaday inuu noolyahay!
Next: Pierre-Emerick Aubameyang oo laga doonayo horyaalka China Super League.